Dabratsiyoon Gabramikaa'el Dura Taa'aa Woyyaanee Ta'uudhaan Filatame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dabratsiyoon Gabramikaa’el Dura Taa’aa Woyyaanee Ta’uudhaan Filatame
Dabratsiyoon Gabramikaa’el Dura Taa’aa Woyyaanee Ta’uudhaan Filatame
Dabratsiyoon filatamuun isaa Woyyaaneen jijjiiramaaf qophii ta'uu dhabuu isii mirkaneessa
Woyyaaneen Dabratsiyoon Gabramikaa’el (Dura Taa’aa), Fatlaworq Gabra’igzaabeer (Itti Aantuu) TPLF gootee filateerti. Kanaan alattis, Asmallaash Woldamikaa’el, Abrahaam Takstee, Geetaachoo Raddaa fi Keeriyaa Ibraahim miseenota koree hojii raawwachiiftuu TPLF ta’anii filatamaniiru.
Woyyaaneen walgahii baatii lamaa boda kan qabattee gadi baate namoota kanniin. Namoonni kunniin dandeettii, bilchinaa fi naamusa yeroon gaafatu namoota qabanii miti. Nama (hooggana) sona qabu tokko tirikaanis barbaadanii dhabaniiti kan Dabratsiyoonii fi Fatlaworqiin qabatanii as bayan. Dubbiin amma argutti jirru waan qabaniin cidha dhaqaniidha.
Namoonni uftooltonnii fi farroonni dimokraasii kunniin taayitaa ijoo kana qabachuun gaariidha; xiiqiin akka hojjannu nu taasisa, qabsoo keenna ni furguggeessa waan ta’eef. Namoonni kuunniin Itoophiyaa jijjiiruu mitii Woyyaanee badii jalaa baraaruuf namoota gahumsa qabuu miti. Namni akka Dabratsiyoon dura taa’aa ta’ee filatamuun TPLF rakkoo nama dandeettii qabuu qabaachuu isiitiif ragaa guddaadha. Dhumni nama tokkicha gabbaraa jiraachuu, Mallasii fi raa’ii isaa irratti uf dagachuun kana. Waan facaafattan haamadhaa jennaan.
Namoonni kunniin worra isaan duraa irra wanti woyyaa qabaniin tokko hin jiru. Hunda caalatti, duras, jalqabaa kaasanii achuma turan. Namoota waa hojjachuudhaaf dandeettii qaban osoo ta’anii kana duras namnis ykn fageenni waa hojjachuu isaan dhoorge hin turre. Dabratsiyoon klaaster jedhee aangoo mummee ministeraa samaa ture. Ammas, dubaan kan ajaju isuma. Garuu, qabsoo Oromoos dhaabsisuu, #BulchiinsaLammaas afaan qabsiisuu hin dandeenne. Kana booda gareen TPLF kuni hujii Oromoo jilbiiffachiisuu fi #BulchiinsaLamaaMagarsaa dadhabsiisuu duruunfatee itti deema taanaan filannoon inni qabu tokko qofa: humna woranaa fi tika biyyatti dhimma bayuudha. Hin gootu hin jedhamu. Garuu, Oromoon ka’eera. Oromoon sodaa du’aa lafa kaayeera. Dhugaan kuni hanga har’aatti tooftaan woraanaa fi humnaa akka hin hojjanne argisiiseera. Uftuultonni Woyyaanee kunniin (Dabratsiyoon, Fatlawoqii, Asmallashii fi Geetaachoo) ammas Oromoo afaan qawweetiin jilbiiffachiisuuf aduun kan hin dhiine itti fakkaachuu mala. Yeroo darbe Ambo irratti yaaleera, Dabratsiyoon. Ammas, gareen ‘haarofni kuni’ kittillayyoota isaanii harka rukuchiifachuudhaaf jecha gadaa isaanii dhiiga Oromoo lolaasuudhaan eegaluu malu. Jarreen kuni akkuma kana duraa Oromoo tuffatu, daandii badii filatu taanaan galaana Oromoon dhidhimuun isaanii waan hin oolle. Hanga dhidhimaniif waa galaafachuun isaanii hin oolu. Cimanii as bayuu isaanii nutti argisiisuuf tattaafii godhaniin dhiigni Oromoo dhagala’uun waan hin hafne. Gaaga’ama Qeerroo Oromoo irra gayuu malu hir’isuuf tooftaa fi tarsiimoo lafaa qabaachuun dirqama. #BulchiinsiLammaa waa hin dhabu ta’a. Oromoon dayaspooraas yaadaa fi xiinxala haala yeroon wolgitu lafa kaayuu qaba. Hunda caalatti, keessaa fi alattis, hundi quba-wolqabaataa hojjachuun dirqiidha. Hubadhaa, bineensi kuni ni madaaye malee hin duune. Lubbuun keessaa bayuu isii mirkaneeffachuuf cimnee hojjachuu qabna.
Namoonni yaadaa fi fuula moofaa kuni hoogana TPLF ta’anii as bayuun isaanii qabsoo Oromoof hiree biraati. Hiree uumamaa jiru kanatti fayyadamuudhaan qabsoo keenna hanga billisummaatti saffisiisuun dirqama hundaati.
Previous articleZimbaabween Prezidaantii fi abdii jijjiiramaa haarawa argatte
Next articleOromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa’an rakkoo cimaa keessa jiru